Chii chinonzi Mbog? - AFRIKHEPRI
37 min kuverenga
Bassa-Mpoo-Bati, vanhu vekumaodzanyemba kweCameroon, vanodana the Mbog strito sensu« Mbog Liaa ". Izwi rokuti "liaa" rinoreva muchiFrench chibwe, dombo kana dombo. Muchidimbu "Mbog Liaa" zvinoreva Mbog inobvumira kuvaka, kushanda, kupurisa mabwe, dombo kana dombo.
Chiratidzo che Pierre aripo ose munyika dzakasiyana kubva kudzidziswa nguva dzose: imwe African ngano anoramba kuti pane anguva kakasaririra yacho kondinendi rima rinonzi "ibwe yemadzitateguru." Ani naani anobata ushe anotonga pamusoro peAfrica yose. NGOG LIPONDO kana pakanga pakaputsika Roche-Bassa Mpoo-Batı anoramba ari totem munharaunda iyi African. In Islam, ose kunonamata Mecca Muslim kunodiwa mapfumbamwe (09) pamakumbo kunhivi ibwe dema of Kaaba apo iri Holy Bible Jesu akati kuna Simoni, mwanakomana waJona, ikozvino ndinokuidzai Peter uye padombo iri ndichavaka kereke yangu.
ibwe Iri chigumbuso kana ibwe munoyerera pamusoro masayendisiti Ages Europe inomirira bonde uye, kunyanya, zvepabonde basa, kuti Mbog kana Alchemy, pasina iyo tinogona kuwedzera simba reShoko rokusika Miviri yeMweya uye Golden Embryo. Bhaibheri Dzvene rinotipa mazano akawanda anokosha panyaya iyi. We chete kubvumira maviri pano, "Bleeding zviuno zvenyu uye chiedza mwenje yenyu" uye "Ishe itsvo nemoyo" (Psaumes7-10, 11-Gérémie20 uye 17-10).
Zviri mupfungwa ichi kuti tine chivimbo zvakadzama kuti shoko Ngondo, mutambo Sawa (munharaunda Douala uye Bassa Mpoo pakati Douala uye pedyo) pagore 1998 nezvaIshmaeri Mbog kana kupfuura zvazviri ane Osiris. Anonyatsotaura izvi: "Chinhu chikuru chekujeka kukuru, chakakomborerwa neuchenjeri hukuru, chakawanikwa muCameroon munharaunda uye mumamiriro eSawa kunyanya. Iri ibwe rinokosha rinokudzwa zvikuru nezvitendero, hukama, hukama, masangano akavanzika, ... pasi rese. Nekutya kuti ichatanga kuwanikwa nevatorwa vanozoitora chokwadi, madzitateguru anobvunza Sawa kuti vabatane kuti vanakidzwe nayo. Izvi ibwe rinokosha vakapfuma uchenjeri hukuru uye izvo dzimwe ngozi kuti pakona haisi kuve zvicherwa umambo sezvo vakatenda chinyakare vakachenjera Ngondo asi Munhu Chiedza, wokuisira uchenjeri hukuru kana Hou -Neter uye akadana kuti ave Osiris weMbog apo iye achange apedza kuisa mukati mavo Dombo rePioporopher reVamwari vekare veAlchemist. Uyu kana mwana Chiedza akaberekerwa 1998 muCameroon uye kunyanya Sawa nharaunda kana munhu mukuru ane mugari muchikamu ichi munharaunda Zimbabwe Cameroon uye akava mudzidzi Mbog mugore rino . Mune imwe nyaya sezvo imwe, akadzokera vapristi Ngondo kuzotsvaka uye akamuwana sezvakaita Magi aita kwaJesu weNazareta sezvo zvichava kana haasi a Ndjèki the Ndjambè Inono yeSawa, kureva kuti Adept yeMbog.
Muchidimbu, Mbog yakaoma mupfungwa kana "Mbog Liaa" uyu ane chiuru nguva mireniyumu chitsvene unyanzvi dzepabonde kubatana womunhu uye mukadzi pamwe dzepabonde continence uye transmutation womunhu seminal simba mune simba rokusika uye pamusoro iyo sublimation yehutano hwepabonde. Chiratidzo chayo ndiAnkh muEgypt yekare uye muAustralia kazhinji, dhaka iro rakasimwa pestle kana ngarava iyo inotanga paddle. Chinangwa chayo ndechokugonesa chero munhu akazvipira uye kuve muhupenyu humwe huMwari hunoziva, hupenyu husingaperi uye huri maari yose, ndiko kureva kuti simba reHou-Neter rizviise muhupenyu hwake, kuti zviitike mumuviri wake wenyama kubudikidza nokuberekwa akateverwa chavanoziva kukura, rakapfava uye yakarongeka "Ida" uye "Pingala" mbiri (02) etheric migero iro wrap vakakomba nomuzongoza, "Heka" chinhu etheric Chishandiso iyo inopfuura nomunyika medullary Canal , kubva pa "Hor-Neter", simba remukati raMwari rinorara muMunhu mumwe nomumwe neAlmor Embryo muhutano hwemashiripiti kuitira kuti iite mweya nemweya.
Ichi chinangwa cheMbog Liaa chinogadzirwa nechitenderedzwa chayo chinoti: Kunyatsosatswa, kushanda kwakakwana kwezvisikwa uye kusafarira zvachose. Jesu weNazareta achati Renies- iwe, zvako musuo muchinjikwa (bonde) uye unditevere apo nevaGnostic kutaura nhatu (03) Revolutionary kuziva zvinoita kuti vari: vakaberekerwa, kufa uye chibayiro nokungwaririra kutambura vanhu.
The akakwana kudzora zvaisazogona kana kuramba kana rufu kuzvikudza pachake nevaGnostic ndiko kuparadzwa zvachose mupfungwa vakaremara kana zvivi vaKristu, processing Mbouh-kuva-Bassa Mpoo-Batı muna Mbouh-pubi kana gadzira akapfupikisa mweya vaGnostic.
Mhedziso kuchena kana kwokupfeka muchinjikwa (bonde) kana kuberekwa yechiKristu rechipiri kunoratidzwa pakusika rezuva miviri dzesangano kana miviri naMwari muBhaibheri pasina iro munhu haagoni kupinda muushe hwaMwari. Izvi chaizvoizvo kurara muIjipiti yekare yaiva kuchinja Apopi dhimoni anoda kana womudenga astral muviri Ka, rezuva astral muviri; Hai, pfungwa radhiabhori kana womudenga mupfungwa muviri Ba, rezuva mupfungwa muviri uye Nebt, dhimoni husina kuda kana womudenga astral muviri Ku, rezuva causal muviri kuti pakupedzisira embody muviri nemweya kuti vari Ankh naSahu.
Kwose kusava nehanya kana kutevera Kristu kunosvika pakuziva kuzvipira kubva pane imwe nguva kusvika kwekutambudzika kwevanhu.
II- Iyo Mbog Technique:
Basa rekutanga kweMbog Liaa zvisinei rinoitika muzvikamu zvitatu (03) zvinomiririra zvitatu (03) Madzimambo Magi mune Bhaibheri dzvene:
1) - Basa rakasviba kana kuratidza ruremekedzo kune zvinyorwa zve the Maat. Danho iri rokutanga rinopera musimboti kwete chete "Ida" uye "Pingala" asi zvikurukuru "Heka" yake zvemashiripiti anatomi kuburikidza anobudirira okuguma shanu (05) Initiations yoMwoto.
2) - Basa mubhizha kureva sublimation seminal simba kana masere (08) initiations chiedza: apo kuramba kufungisisa zvikuru uye kunyanya kuti usingaonekwi Body, wacho anobvuma kuti kurarama kuyambuka kwerenje yemubhaibheri,muedzo weLiyep li Yèli Cameroon Bassa, nzvimbo yevarombo of Sufi Islam or ngarava ye-negro-pharaonic yakaputsika. danho iri ndopanoguma iyo goho kwoUmambo pedyo Insider kunobva vaviri dzepabonde alchemy musi Kabbalah: payo synthesizes muchikamu chokutanga zimukadzimu iri nyama tanga maviri maviri (22 ) mukuru arcana weNegro-Pharaonic Tarot, iyo:
Arcane 1 ndiyo Mage weKabbalah. Icho chinomiririra chinotanga; zvose izvo munhu anotanga muupenyu hunoita.
In rokumusoro chikamu, maziso anomirira meso Baba, kusaverengeka, ari Caduceus pakati Mercury, ivo kabirs sere inodzora nyika, chitsvene Vasere. Ivo dzinofananidzira maviri tambo ganglionic kuti putira esoterically muna musana uye vari Ida uye Pingala, Zvapupu zviviri, weMiorivhi Two, iyo Candelabra maviri vari pamberi pechigaro cheushe chaMwari Panyika. Izvozvi Zvapupu zviviri zvinobva pabonde.
Tinoona purogiramu Mage kurudyi, iyo inoratidza kuti ndiyo yose yerudyi rwake iyo inoonekwa mumaziso e manifesto. Nyoka pahuma yako inoratidza tenzi anozviziva. Simba rinobata muruoko rwake rworuboshwe rinomiririra rwonzi rwomusana uye rinoratidza zvisingaperi. Ruoko rwake rworudyi runotaura kune nyika, iyo inoratidza kuti inotonga nayo nesayenzi, iyo inofanira kukwira ichibva pasi, iyo isingagoni kukwira pasina yekutanga kuburuka, kuti zvakafanira kuburukira mu Ninth Sphere. Iyo yekupedzisira inomiririrwa nenzira mbiri: yekutanga ndeyepabonde, cubic stone; yechipiri ndiyo mapfumbamwe mapfumbamwe, atomiki gehena apo inotanga kubuda inofanira kuburuka. Zvinoreva kuenda pasi kuti uende.
Pamusoro penguvo yake, kona katatu inotarisa inomiririra simba guru rinobatana muKETHER, iyo 1. Kune rumwe rutivi kune tafura inomirira zvinhu zvina (pasi, mvura, moto, mhepo), ndege yemuviri. Zvinhu zviripo zvinoridzirwa-mell pamusoro payo: simba remunondo, Lingam (murume wepabonde nhengo); chalice, iyo inomiririra kune rumwe rutivi huro hwehupi uye kune rumwe rutivi Yoni (chikadzi chepabonde); uye mwedzi, unofanirwa kuchinjwa kuva zuva.
Pasi petafura ndiyo isingafi, iyo Phoenix shiri, swan Kala-Hansa, Mweya Mutsvene unofananidzira rudo. Chinzvimbo chayo pasi petafura chinoratidza kuti iko kuburikidza nemoto mutsvene weItatu Logos iyo inofanirwa kuisa mutemo mune izvozvi zvinokanganisika zviri patafura.
Muchikamu chezasi, cubic stone, dombo rakashanda refilosofi rinotitaurira basa rinofanira kuitwa; iyo ibwe diki reLesod, zvepabonde, chigumbuso uye chinonyangadza.
Samael Aun Wéor - Tarot neKabbalah
Arcane 2 ndiyo muprisitikadzi, Occult Science, Magic Balance. Mune simba reMweya, Uyo ndiye Baba vari muchivande, uye VEVIRI, Amai Amai, avo vari kudzokorora kwaBaba. Nokudaro, mumwe nomumwe wedu ane Baba Vake uye Amai Vake Vatsvene, avo vatsvene zvikuru. MunaBaba naamai AmaKundalini, tinoona mapuranga maviri Iakin naBohazi, avo vanotsigira Temberi.
Muhupenyu hwevanhu, Amai vekudenga vanotora mufananidzo wenyoka. Kune nyoka mbiri: nyoka inoidza yeEdheni, nhengo inonyangadza yegandartiguator; uye nyoka yendarira yakaporesa vaIsraeri murenje, kana nyoka yeKundalini. Aya ndiwo mazano maviri ezvose: mhandara uye chifeve.
Zviri pachena kuti nhamba 2 iri mukati momuviri wemunhu, kuti yakabatana ne1, kuda uye 2, mafungiro. Chinokosha kune simba rose chiri muhutano hwehudo nekufungidzira muhutano hwakasimba.
Mumvura yehupenyu inooneka mativi maviri eimba yeIsis: white, Iakin uye yakasviba, Bohaz. Mumwe nomumwe wavo ane mazinga mana, ayo anomiririra miviri yezvivi (muviri, hunokosha, astral uye pfungwa).
Pamusoro, Madzimai anogara pakati pematombo maviri akareba. Icho chiri mukati mutemberi, saka mapuranga acho anodzorerwa kune rumwe rutivi apo tinovaona. Paanenge agere, anomuratidza kuti haana kumira; muAcane 1, muMage imire, ichishanda. Anoratidza ruzivo rwaro rworuboshwe, rutivi rwake rwakashata.
Ari pamakumbo ake, hafu inovhara bhuku rayo rakazaruka, richiratidza kuti iye Uchenjeri, kuti anodzidzisa Kabbalah. Pachifuva chake, mutambo we ansée, chiratidzo chehupenyu, hwheyo, hwaro, weVenus, muchinjikwa Tau. Muchinjikwa pabhokisi risina chinhu zvinoreva kuti chigadzirwa chacho, mukaka, ndizvo zvakanaka. Iyo nyoka pahuma inoratidza Mastery.
Pamusoro wake, nyanga dzenzombe tsvene Apis, murume weCheaven Cow, mukati anofananidzira Baba, uye kunze, psychological Self (kutadza kwedu). Isu tinowanawo humwe hunhu hweChuru duku kana kabir. Denderedzwa nyoka inomesa muswe wayo; iye anomiririra Amai Cosmic, Mbudzi Dzvene. Chifukidziro chinowira pachiso chake chidzitiro cheIsis. Iyo inofananidzira kuti zvakavanzika zveMama Nature zvakachengetwa kumunhu akazvimirira, uye izvo chete zvinotanga, mushure mekucheneswa kusingaperi uye mafungiro anokwanisa kuzviwana. Iwe unofanirwa kuva wakashinga uye kusimudza chidzitiro cheIsis; chirevo chedu gnostic ndiTéléma (kuda).
ARCANE 3 : THE IMPERATOR
The Arcane 3 is Empress yeTarot, Urania-Venus yevaGiriki, mweya wakakristu, Amai vokudenga, Amai Amai, mai chaivo vedu, Amai vehupenyu hwedu vanofanirwa kutsika Lunar Ego kuti vauye pamusoro wake vane gumi namaviri.
Kugadzira, imwe inoda matatu masimba makuru anobva kumusoro, kubva kuna Baba, uye aripo pane zvisikwa zvose: simba rakanaka (Arcanum 1 yeTarot, murume); simba rakashata (Arcanum 2 yeTarot, mukadzi) uye simba rekusarerekera (mweya unopesana) uyo unokonzerwa nekubatana kwepabonde kwevaviri. Chakavanzika ndecheA AZF Arcanum, iyo inoshandura Mwedzi kuva Sun uye ine zvinhu zvitatu: zvakanaka, zvisina kunaka uye zvematongerwe enyika.
Nechepakati chikamu rinowanika mukadzi korona yenyeredzi gumi nembiri (1 + = 2 3), rinomiririra gumi zodiacal zviratidzo, masuo gumi muguta dzvene, gumi kiyi Basil Valentine, gumi renzou zvepasi Ors . Pamusoro wake, mukombe, pane iyo inomira nyoka, chiratidzo cheMastery, iyo yakakwirira. Ane muruoko rwake rworudyi mudonzvo wesimba, uye anoedza neruoko rwake rworuboshwe kuti asvike njiva, iyo inomiririra Mweya Mutsvene. Nguo yake izuva, zvose zvinoratidza kuti mweya mweya, unobereka Arcane 1 uye 2. Anogara pamusoro pedombo rekubhiti rakatoshanda zvakakwana.
Mumvura yehupenyu, mumwe anoona mwedzi (mwedzi Ego) pasi petsoka, izvo zvinoratidza kuti munhu anofanira kutsika-tsika kuti achinje kuzuva.
I3 ndiyo nhamba yeItatu Logos, iyo inotungamirira zvose zvakasikwa; ndiyo rwiyo rweMusiki.
I3 ihwowo muMmress, chiedza chaMwari, chiedza mukati mavo, Mwari Wamai. Iyo inofananidzwa kubva pazuva rokutanga rezvisikwa kune chikamu icho cheGenesisi chinoti, "Mwari akati, Ngakuve nechiedza, uye kwaiva nechiedza. "
Amai vokudenga vari munharaunda yepanyika vanoreva kugadzirwa kwezvinhu, uye munharaunda yemweya zvinoreva kushandiswa kwemweya.
The Ternaire, nhamba ye3, inokosha zvikuru. Icho iShoko, kuzara, kubereka, chimiro, chizvarwa chezvinhu zvitatu zvenyika.
ARCANE 4 : THE EMPEROR
The Arcane 4 is Kesari weTarot, kubva pahuma yake nyoka inomuka, chiratidzo cheMastery; korona yakagadzirwa nyoka ndeyeIsis, amai vedu vamwari. Pamusoro wake, hove yakagadzirirwa ina, makona mana, inomiririra zvikamu zvina, mavhangeri mana, maVedas mana, machina makadhi makadhi, zvikamu zvina zvemwedzi, makore mana, nguva mana yemwaka, iyo nzira ina (sayenzi, uzivi, unyanzvi, chitendero). Apo patinotaura nezvemakwara mana, tinofanira kunzwisisa kuti ivo chete chete: ndiyo nzira yakamanikana yakaoma mu razorblade, nzira yekuvandudzwa kwekuziva.
Isuwo tinewo mukombe wacho, chigadziko, nhengo dzepabonde, chando, Muladhara chakra, muromo wepinini uye distiller, uropi.
Anobata muruoko rwake rworudyi mushandi wesimba. Anogara pamusoro pebasa rakashanda rakashandurwa, rinobudisa arcana yapfuura. Mukati mebwe, tinowana kati, moto.
Mumvura yehupenyu ndiyo tsvimbo yemirairo, musana.
Arcane 5 ndiyohierarch weTarot ane nguo yake yehondo, akabata muruoko rwake rworudyi vashandi vesimba. Anoshandisa chimiro chejackal chete apo iye anotonga, kuita ruramisiro, iyo inofananidzira tsitsi huru uye kuoma kukuru kweMutemo.
Mumvura yehupenyu ndiyo mamiriro ekururamisira, izvo zvinoratidza kuti kufamba, zviito uye kugadzirisa kwemuviri wenyama kune simba-based.
IAcanum 5 ndiyo Hierophant. Ndiyo pentagram inopisa, iyo Flaming Star, chiratidzo che simba rose raMwari uye simba rose. Icho chiratidzo chisingaitiki cheShoko rakaitwa nyama, nyeredzi inotyisa yeMagi.
Iyo pentagram inomiririra murume, murume-microcosm uyo, nemaoko ake nemakumbo oga, anoumba nyeredzi shanu. Iko pentagram pamwe nemashoko maviri pasi pasi inomiririra Satani, inoshandiswa mumashizha matsvuku kuti invoke rima. Nekona yepamusoro kumusoro, inomiririra mukati mukati maKristu wevanhu vose vanouya panyika ino, anosimudzira Mwari; tinoshandisa iyo muchena machenjeri kudana zvisikwa zvaMwari.
Mukuru weHarane 5 ndeye Anubis, mwari (Neter) ane jackal musoro. Tembere yaAnubis ndiyo temberi yeVatenzi veKarma. Anubis anochengeta bhuku re karma mujecha. Munhu wese ane bhuku rake rekubhuku.
IAcanum 5 inomirira karma yekutanga. Tinofanira kuziva kuti karma, shure kwekuongorora, inoshumira kurarama munyama uye pfupa iyo yose yemutambo wekuda kwaIshe wedu Jesu Kristu.
ARCANE 6 : INDECISION
The Arcane 6 is anoda Tarot. Zvinoreva kubudirira. Munhu aripo pakati pezvakanaka uye kunaka, pakati pemhandara nehure, pakati peUriania-Venus neMedusa. Isu tinosungirwa kusarudza imwe uye imwe nzira. Iyi arcane inonzi kusagadzikana nokuti mudzidzi haazive nzira yaunosarudza.
Akamira mumvura yehupenyu, mudzidzi anotarisana nekona katatu iyo mhedziso inoratidzwa pasi. Ruoko rwake rworuboshwe runoiswa pamusoro pekodzero. Zvose izvi zvinoreva kuti mudzidzi wawa, ndicho chikonzero anonzwa achikwezva kuMedusa (ego yepfungwa) kuruboshwe. Kumudyi kwake ndiMudzimai.
Pamusoro pechiri iri, kumucheto wepamusoro, chiremera cheMutemo, agere pamusoro pechuru chetatu chakakwira kumusoro uko inoumba uta, chinangwa kubva pakuguma kwayo musoro weMedusa, muchibvumirana neaxiom iyo " Tinofanira kuderedza Medusa ".
Chimiro chega chega chinopa neophyte nzira; nzira yeruboshwe uye nzira yekurudyi. Miseve yeruramisiro inotarisana nemugwagwa weboshwe.
ARCANE 7 : THE TRIUMPH
Arcane 7 ndiyo kupembera yeTarot, ngoro yehondo iyo Monad akaita kuti agone kuita munyika ino, kushanda mumunda weHupenyu. Icho chigaro chekare chave chichioneka chinoratidzwa nemitumbi yayo minomwe.
Pamusoro pekasi ino, mumvura yehupenyu, tinoona mazhenje maviri, machena uye madema, anotakura makotori avo; iyo inofananidzira simba revarume nevakadzi. Mhare, uyo anomiririra muInnermost, anomira pangoro yake yehondo, pamusoro pekubwinya kwebereki (kuita zvepabonde) uye pakati pezvimiso zvina zvinoumba sayenzi, unyanzvi, uzivi uye chitendero, maanozobudirira. Iyo mbiru ina dzinomirirawo zvinhu zvina, zvinoratidza kuti anozvitonga.
Anotakura muruoko rwake rworudyi munondo unopisa, uye kuruboshwe, mushandi wesimba. Simba ndiyo senzi inobva kuna Mwari inoita kuti tive nesimba. Muhondo anofanira kudzidza kushandisa vashandi uye nebakatwa, uye achawana kukunda kukuru. Chirevo chedu ndicho THELEMA.
The Arcane 9 Tarot ndiyomunamati, kusurukirwa. Iyi arcane kumusorosoro, ndiyo Ninth Sphere, Sex. Zvose zvinotanga kuchena mavambo anotanga ipapo. MuNini Sphere, pakati pePasi, mukati memwoyo wayo, chiratidzo chekusingaperi, chekuremekedza. Ichi chiratidzo chine mawindo masere. Chiratidzo chekusingaperi ndeche Mutsvene Eight.Tinowanikwawo muchiratidzo ichi chimiro chemoyo, uropi uye zvepabonde zveunyanzvi hwepasi, Chamgam. Hondo inotyisa, uropi kurwisa zvepabonde uye zvepabonde pamusoro pehupi; uye chinhu chinosuruvarisa ndechokurwa kwemwoyo-ku-mwoyo.
Muna iri arcane tinoona mumvura yehupenyu mwedzi unosimudza. Mukati, chikamu chekare chinopfuurira, akabata muruoko rwake rworuboshwe mwenje unomuratidza nzira; ndiwo mwenje weThoth Djehuty, Wisdom. Anosendamira neruoko rwake rworudyi pamusoro pemirasi yemadzitateguru, uyo anomiririra musana wemakereke manomwe.
Iyo yakagadzirira, yakangwara uye yakachenjera, yakaputirwa mucape yekudzivirira yaApollonius, iyo inofananidzira kungwara. Kurutivi rwake kunomira muchanza chekukunda.
Munharaunda yepamusoro, zuva rinopenya nemirairo yaro mitatu (kuratidzira matatu makuru makuru) inoburuka kuti ibatane nemwedzi. Mwedzi unokwira uye zuva rinoburuka; izvi zvinoratidza kuti tinofanira kushandura mwedzi muzuva kuburikidza nekushandura, kutendeuka neA AZF kunobata miviri miviri kuva miviri yezuva.
ARCANE 8 : RUTENDO
The Arcane 8 Tarot ndiyo mutongo. I8 ndiyo nhamba yaJobho, murume ane kutsungirira kutsvene. I8 ndiyo nhamba yemuedzo uye marwadzo, uye inomiririrwa nekakatwa, iyo inofananidzwa nechimiro chesoteric.
Mune iri arcane, tinoona mumvura yehupenyu, nyoka inyorera muswe wayo, ichiumba chiratidzo cheMama wezvinhu zvose, zvisingaverengeki (0, zero).
Mukadzi anofugama pamatatu matatu, anomirira Arcanum AZF (Mvura pamwe neMoto zvakaenzana neChenjeri).
Mukadzi anobata muruoko rwake rworuboshwe munondo we simba unongedzera kumusoro, uye muruoko rwake rworudyi ane chikero chekuenzanisa, kuratidza kuenzanisa kunofanira kuvapo pakati pepfungwa, mwoyo uye zvepabonde. Muchikamu chepamusoro chinowanikwa Ra (iri chiratidzo kuratidza Ra akasiyana nemapapiro).
ARCANE 10 : LA KURIPIRWA
The Arcane 10 Tarot ndiyo vhiri cosmogonic ye EZECHIEL. Tinowana mune imwe iyo hondo yeanopikisa: Hermanubis kurudyi, Typhon kuruboshwe.
Muchiguru chepikisa, nyoka mbiri dzinorwisana. Inovhara chakavanzika chezivo. Kubva kune rimwe chete tsime rinosvika nzizi mbiri dzeparadhiso: chimwe chazvo chinopinda nepakati pemasango akaoma ezuva, achidiridza nyika yefilosofi negoridhe rechiedza; rimwe rinopararira, rima uye rinotambudzwa muumambo hwegomba risina chigadziko. Chiedza nerima, chichena nemashiripiti, kurwisana. Eros naAnteros, Kaini naAbheri vanogara mukati medu mukurwisana kukuru kusvikira tawana chakavanzika cheSphinx uye tinotora munondo unopisa kuti tisunungure kubva pamhepo yemazana emakore.
Mumvura yehupenyu tinoona nyoka mbiri: dzakanaka, dzezuva, dzakaporesa vaIsraeri murenje uye zvakaipa, mwedzi, nyoka inoidza yeEdeni, miviri yenyama, miviri yezvivi.
Muchikamu chepakati, gumbo rengoro, Samsara: gumbo revakafa nekuberekwa. Kurutivi rworudyi kunokwira Hermanubis mukushanduka-shanduka. Uye kurutivi rworuboshwe runoburukira Tifoni-Baphomet, kuronga. Pashure pemakore zana nemasere, gumbo rinoshandura zvakakwana: panguva yekukwira, tinocherechedza nekushanduka-shanduka kuburikidza nemumumera, mbeu, mhuka uye hutongi hwevanhu. Paanoenda, anotora nzira imwe chete. Iri gumbo rinotendeuka zviuru zvitatu, mushure mezvo izvo Essence, mushure mekucheneswa kwepamusoro, inodzokera kune Absolute, asi pasina kuzviziva.
Muchikamu chepamusoro, Sphinx kuenzanisa pairi, rinomirira Amai Nature. Iyo Sphinx ndiyo mutungamiri wekutanga weMakadzi Mukadzikadzi Wenyika. Tinowana maari mufananidzo wezvinhu zvishanu:
- Mvura: chiso chevanhu;
- AIR: mapapiro egondo;
- NYIKA: makumbo ehando;
- MOTO: mitsetse yeshumba;
- ETHER: iyo cane.
Icho chete kuburikidza nekumuka kwekuziva kwatichazoziva kana tatove takatora uye tatangazve kutenderera. Chero bedzi isu tisina kuparadza Ego, tinofanira kudzoka. Kuti uzvisunungurire iwe pachako, zvakafanira kufa.
ARCANE 11 : CHINYORWA
The Arcane 11 Tarot ndiyo kunyengetedza. Tinoona ibwe rekubhiti mumvura yehupenyu. Mukati mebwe iri, mhirizhonga, pane iyo njiva yeMweya Mutsvene. Pakati, mukadzi anovhara muromo weshumba ine shungu, iyo inoratidza kuti iye mukuru kune chisimba. Musoro wake wakavezwa korona uye nyoka imire pahuma yake, zvichiratidza Mastery.
Iyo shumba ndiyo inopisa moto, uye inomirirawo goridhe. Pakutanga, matangi emadzimambo akanga akatorwa neshumba. In esoteric Chirevo ngoro wakavhomorwa neshumba chinofananidzira Solar Miviri (Ka, Ba, Ku, kuti Ankh uye Sahu yeIjipiti yekare).
Iyo hieroglyph yeAntanum ye tarot iyiwo mudzimai akanaka ane korona ine chiratidzo chekusingaperi, uyo anyerere, ane runyararo rweOlympic, anovhara nemaoko ake muromo weshumba inotyisa. Chigaro cheMadzimambo Madzimambo chakanga chakashongedzwa neshumba huru dzegoridhe. Kunwa ndarama kunoreva moto mutsvene weKundalini (Uraeus). Izvi zvinotiyeuchidza nezveHorus: OR. Tinofanira kupfuudza kutungamira kwehupenyu mugoridhe reMweya, uye basa iri rinobvira chete mu laboratori yean alchemist iyo yepabonde.
Apo njiva yeakachemi yakavezwa korona, inova mwari (Neter) moto uye inotanga nemaoko ake, muromo unotyisa we shumba inotyisa. Iyo yegoridha yekunwa yealchemy ndiyo moto mutsvene weMweya Mutsvene (Uraeus). Pasina iyi ndarama, kubatana pakati pemuchinjikwa-munhu nemweya-katatu (Arcanum 12) hazvibviri.
ARCANE 12 : The Apostolate
The Arcane 12 Tarot ndiyoapostolate. Zvinomirira gumi nezviratidzo Zodiac, gumi navaviri, madzinza gumi nemaviri aIsraeri, maawa gumi nemaviri kubika Alchemist, gumi mano rehydrogen Si-12.
Mumvura yehupenyu, pane hove yaSoromoni, yakasiyana-siyana nenyeredzi nhatu. Aya matatu matatu akakwirira anomiririra vatatu vatatu vaHiram Abif (mukati mukati maKristu): Judhasi, Pirato naKaiphe, iyo Apopi, Haï uye Nebbt muEgypt yekare. Pakati, miviri miviri imwe neimwe ine madhigiri mapfumbamwe anomiririra Ninth Sphere. Pakati pezvikamu zviviri, pane murume akaremberedzwa netsoka imwe, maoko ake akasungwa. Netsoka dzake dzinoita musara uye maoko ake, katatu inopindurwa: kadhi ye 12 yeTarot ndeyeAlchemy yepabonde iyo murume anofanira kubatanidza nayo nekatatu-Mweya, kuburikidza nemoto wepabonde.
Arcane 12 inokonzera kutambura kwakawanda, zvizhinji zvinotambudza. Iyo yakarongeka yakaisvonaka kwazvo, sezvo 1 + 2 = 3, iyo inoreva kushandiswa kwezvinhu zvose uye zvemweya.
ARCANE 13 : RUFU
Arcane 13 Tarot ndiyo Arcane ye rufu. Upenyu nerufu zviitiko zviviri zvechimwechete. Iyi Arcanum ine zviitiko zviviri:
1. Rufu rwevanhu vose (chimiro chemuviri);
2. Rufu kubva mundima yekuona esoteric (mukati mumiririri).
Muchi Arcanum, zvisote zvegorosi zvinomiririra kugadzirisa; Semaruva ndiko kutanga kwehupenyu, gorosi ndiyo mugumo.
Munhu ane chiremera cheMutemo anopa mutsara wegorosi; izvi zvinosanganisira zviyo zvakawanda uye zviduku, zvinodanwaBoby-caldenos uye iyo inomiririra Maitiro, iyo musoro wekuti munhu wese anotakura muhuro hwake hutatu (hunyanzvi, pfungwa uye motokari).
Uyo ane mbeu shoma anorarama zvishoma, achifa mazuva mashomanana kana mwedzi mushure mokuberekwa. Mumwe anorarama nechechitatu, uye mumwe anofa nechetatu: uyo anoderedza hutungamiri hwake hunopinda mukupenga. Iyo inoparadza motokari yake yakaguma yave yakasvibiswa, nezvimwewo, ... iyo inoderedza nzvimbo yake yepfungwa ine chirwere chemwoyo. Iyi Arcanum ikadhi raJudhasi Iskariyoti, rinomirira rufu rweEgo. Iko kuipa ndiyo chiratidzo chinoshandiswa chengirozi yeMutumwa eRufu.
ARCANE 14 : THE TEMPERANCE
The Arcane 14 Tarot ndiyo kuzvidzora. Mumvura yehupenyu, tinoona maruva matatu, uye pakati, imwe nyoka inomuka. Aya maruva matatu anomiririra: Tambo, Wepedyo; Chit, the Buddi, mweya wemweya; Ananda, manas, mweya wevanhu. Iro maruva matatu anomiririrawo: moto mutsvene, zvitsva uye Blend.
Mukati, mutumwa anotiratidza nenguvo yake mutatu uye Quaternary (iyo miviri ina yekutya). Pagoni rinovhenekera zuva nemine gumi nemana, mairi manomwe anoonekwa uye manomwe asingaoneki; izvo zvinooneka zvinomiririra mapuraneti manomwe uye zvisingaoneki zvinomwe chakras.
Ngirozi inobata makapu maviri kana zviputi zvinosanganisa mairi maviri; imwe kapu ndeyegoridhe uye ine yefa yakatsvuka, imwe yacho ndeyesirivha uye ine chisikisi chena. Zvose izvi zvinoumba hupenyu hwehupenyu hurefu. Masters akawanda akawana kusafa: Babaji, Sanat Kumara, Paracelsus, nezvimwewo.
IAcanum 14 inoshandura chingwa newaini muropa raKristu; neino arcane, chingwa newaini zvinopomerwa naKristu maatomu achidzika kubva pakati pezuva.
IAcanum 15 Tarot inomirira iyo BOUC yeVANHU,Lucifernezvimwewo. Iyo Alchemist inofanira kuba moto kubva kuna Dhiyabhorosi. Apo patinoshanda neAAA arcane tinoba moto kubva kuna Dhiabhorosi; iyi ndiyo nzira yatinoshandura nayo kune vanamwari (Neterou), saka nyeredzi shanu inotarisa inopenya.
Nyanga dzinopera mumatanho matanhatu. IAcanum 6 iri kurara uye inoratidza kuti zvepabonde zvinosunungura rusununguko nekuchena, kana varanda hweMunhu kuburikidza nechido. Kune musiyano pakati pei Arcanum neAcanum 1: ruoko rworudyi runotarisa uye kuruboshwe kuri kuratidza pasi.
Mumvura yehupenyu munhu anoona mufananidzo weGeburah (mutemo). Pakati penzvimbo inoonekwa dutu guru-Baphomet, akabata muruoko rwake rworuboshwe tsvimbo yemurairo, uye mune nyoka yakarurama inomuka. Ruoko rwake rworudyi ndume uye kuruboshwe ndeyekadzi. Mazamu ake anoratidza kuti iye anonyadzisa. Anofukidza huchenjeri hwake nebhandi, uye kubva pabhesi rimwechete rinodhonza muswe. Chiso chacho chinoshungurudzwa pamusana pezvikanganiso zvekare. Baphomet inomiririrwa semhangura yekuti hupenyu hwevanhu hwave hwakasvibiswa nekuderera kwayo. Tinofanira kuchenesa mhangura, Dhiyabhorosi ndiye mudzidzisi wepfungwa uye mutariri wemasuo eimba tsvene kuitira kuti vasanangurwa chete vagone kupinda, avo vakakwanisa kukundwa miedzo yose yakatemwa naDhiyabhorosi.
ARCANE 16 : LA nopwanyika
IAcane 16 Tarot ndiyo inowanikwa Storm Towerla Shongwe yeBhabheri. Mumvura yehupenyu, mumwe ane vashandi vesimba, baton yemurairo, uye cilice (chikwapu) chinomirira Fragility. Pane rumwe rutivi rwezviratidzo izvi, nyoka mbiri, dzakanaka uye dzakaipa.
Muchikamu chepamusoro chinoburuka raira rekutonga kwepasi rose, kuparadza shongwe yeBhabheri. Mifananidzo miviri inoputika pasi pegomba risina chigadziko, imwe kurudyi uye imwe kuruboshwe; ivo vanowira vachiita chiratidzo cheseredzi inopisa inopisa nemaoko avo, makumbo avo nemisoro yavo pasi, vachifananidzira kuwa kweBoddisatwas; kugwa kunokonzerwa nekuita zvepabonde, nemudziyo weThut Jehuty wakaparadzwa. Ndokusaka Krumm-Heller akati, "Unofanira kusimudza mukombe wakakwirira"; akanga achitaura nezvewaini tsvene.
Kana tikawedzera nhamba dze Kabbalistic kuAcanum 16, tinowana 1 + 6 = 7; izvo zvikamu zvinomwe zvemoto kana moto weKundalini, huraji hutatu hwepfungwa. Kana iyo inotanga kuwira, iyo inorohwa neAcane 16 uye inowira pasi pamatanho aya.
ARCANE 17 : TARIRO
The Arcane 17 Tarot ndiyotarisiro. Isu tine mumvura yehupenyu, maviri katatu: akanaka uye akaipa. Muchikamu chepakati, mukadzi anosasa pasi nemakumbo maviri (masume nevakadzi); pamusoro wake, maruva ejusus anoratidza kuzadza kwakakwana kwe chakras yake.
Muchikamu chepamusoro chinopenya nyeredzi yeVenus, mairi masere, anofananidzira kuti mushure mokutanga kwemoto kunouya kune magetsi.
Iyo hieroglyph yeAntanum 17 yeTarot ndiyo nyeredzi inopenya uye yevechiri chesingaperi. Mune iri arcana inoonekwa mukadzi asina kupararira achipararira panyika pasi rehupenyu hwehupenyu hwepasi rose hunobuda kubva mumasasa maviri, imwe yegoridhe uye imwe yesirivha.
ARCANE 18 : THE TWILIGHT
IAcane 18 ye Tarot ndiyo chiedza et ombre, kuchena nemashiripiti zvinowanikwa pakati pembwa mutsvuku nembwa yakachena, piramidi yakasviba nemuchena.
Mumvura yehupenyu, chinopisa mukati mechina chinotenderera chinoratidza kuti kuburikidza nokuputsa mudziyo weThoth Djéhouty, tinouraya Amai Amai sechadenga.
Pakati, mapiramidi maviri, mumwe mutsvuku uye mumwe mutsvuku, anomirira zvakanaka uye zvakaipa. Imbwa mbiri kana mhumhi, imwe chena uye imwe yakasviba, inodanidzira pamwedzi; dhena rakanaka uye rinomirira ushamwari, rima harina kunaka uye rinomiririra ego yepfungwa. Zvinomiririra hondo yakaipisisa pakati pemasikati uye masimba aMwari. Mwedzi pachawo unomiririra zvepabonde; Tinofanira kushanda nemwedzi kuti tishandure muzuva. Iyo imbwa inomirirawo hutano hwepabonde, ndicho chikonzero ichi imbwa inotitungamirira kumasuwo eA Absolute.
IAcane 19 yeTarot ndiyo inowanikwa kwemubatanidzwa and of kukunda. Mumvura yehupenyu, maruva matatu anomiririra matatu masimba makuru. Pakatikati, vaviri vanobatana maoko vanoumba tau key. Muchikamu chekumusoro, zuva riri pa 7 rays rinopenya pamusoro pemisoro yavo, chiyeuchidzo chezvidimbu zvinomwe zvemoto.
Iyi arcane inotidzidzisa kuti kuburikidza nekushandura kwemashoko tinosvika pakusunungurwa kwekupedzisira.
The Arcane 20 Tarot ndiyo rumuko. Mumvura yehupenyu, chitubu chinomiririra kuvaka; iyo nheyo yekamuri ndiyo cubic dombo. Pakati pamakoroni maviri, machena uye madema, chete mhepo yakasara, chiratidzo chekunatswa.
Pakati pepano inopukunyuka kubva mumukadzi nyanga ine musoro wemunhu, iyo inofamba kuenda kune dzimwe nyika yemweya uye inomiririra mweya. Hazvigoneki kuti kuburikidza nekumutsa pfungwa, tinozvishandura isu kuva mahedheni ane misoro yevanhu, tinokwanisa kubhururuka takasununguka mune nyeredzi nzvimbo. Pamusoro wehove uye mummai, chiratidzo chinomirira pineal gland, chinyorwa chekujekesa.
Mweya wemupi wehupi wekare weEgypt yekare ane miviri mina: mummai, Ka (astral body), Ba (muviri wepfungwa), uye Ku (causal body).
Nokuti ipapo kune kumuka, panofanira kutanga kuve rufu; kunze kwayo, hakuna kumuka kwevakafa. Zvakanaka sei kufa kubva pakarepo kusvika pakarepo! Chero norufu kunoitika itsva.
Arcane 21 ndiyo Zvaiva Tarot kana transmutation. Muchikamu chepamusoro tinoona mwedzi mutsvuku uye mwedzi wakachena, an antithesis.
Mukati, mage inobata vashandi vevakuru vekare nerumwe ruoko, uye rutivi rwemuchinjikwa kana Tau kune rumwe rutivi, anomira pane nguruve inozarura muromo wake mukutarisira kumudya.
Ngwenje ndiSeti, Satani, mupfungwa weAvo, weAvo, uyo anogara achimirira uyo anozviwisira pasi, kumudya. Mage inobata chikepe cheTau (Arcanum AZF) nekudzivirira.
Mage yakafukidzwa neganda reganda. Pasina mubvunzo, iyo imbwa uye tiger zvakanyatsobatanidzwa mune basa rimwechete rekufa kwechakavanzika. Iyo imbwa ndiyo moto wepabonde, chimiro chekushushikana chinotarisa pamudzi wekutanga seminiti yedu. The ingwe yakasiyana, uye kuti Knights Tigers vanoziva, jaguars izvi vachirwa kuzvikudza pachake uye vakadaro zvechokwadi felines pamusoro echimurenga zvepfungwa, vawira vachizvipikisa, yavo mupfungwa kuremara.
Chaizvoizvo, kunyanya uye kuzvikudza kweguru kunokosha kuti uuraye mutoro wevanhu uye kuti uite huchenjeri huroka hwezvinomwe nyoka, zviratidzo zvevakagurwa musoro, vhenekera mumunhu.
ARCANE 22: KUTENDA
IAcane 22 ye Tarot ndiyo korona yeupenyu, kudzokera kuchiedza, chimiro cheChokwadi mukati medu. Apocalypse inoti, "Iva akatendeka kurufu, uye ndichakupa korona yeupenyu."
Mumvura yehupenyu tinoona muchinjikwa weS Swastika, unofananidzira Muladara chakra, ine mavara mana.
Mukadzi anomiririra Chokwadi, anoimba rudimbwa; iye anonyadzisa chiremba chepfumbamwe chine zvepabonde kusvikira awana chinyorwa. In rokumusoro chikamu, vamwari mana (Neterou) rufu: Mestha, Hapi, Douamout Kebhsennouf uye vanomirira zvinhu zvina: Earth, Water, Fire uye Air, mana inoshamisa mhuka Sexual Alchemy.
Pamusoro pavanamwari vana vekufa, tinowana nyoka tsvene iyo inovhenekera nharaunda yaRa, yakachengetedzeka kune Osirian anoziva mwanakomana wechiedza.
Uchenjeri Husingagumi uye Hwakakwana Hwose hunodzidzisa matanho matatu ayo ani naani anoshanda muMbog (Burning Forge yeVulcan) inofanira kupfuura: Kucheneswa kana Kutanga, Kujekesa kana Adeptat et Kukwana. MuEgypt yekare maharahara, mukati memashiripiti emashiripiti, idzi zvitatu nzira ndeizvi: kudzidzira, Shamwari kana Mazano et vanatenzi.
3) - Basa re White ndiko kuti kukura embryo Golden kana zvachose kuchinja Mbouh-kuva-Mbouh pubi kuburikidza kuzadziswa pfumbamwe (09) pabasa Hercules rokutanga. Iyi nhanho inoumba chikamu chechipiri chekubatwa mukati menyama panyama yezvakaitika makumi maviri nemaviri (22) guru arcana yeNegro-Pharaonic Tarot.
The Mbog strito sensu uyo ​​anokurudzira muIjipiti yekare Thot Djéhouty (Thoth Hermes Trismegistus maererano neVaGiriki) ndiyo nzira yakananga, yeumambo kana yekutsanya yaHou, Hupenyu husingaperi uye hwepasi rose. Anotungamirira murume akachenjera kuti ave nechiedza chakakwana mune humwe hupenyu. Medieval Europe The vakachenjera akaritumidza kuti "Alchemy" izwi anouya sezvo Tenzi Samael Aun Weor (www.institutgnostique.com/fondateur) rechiLatin rokuti "Alchimia" Latinization shoko Arabic "Al Kimiya" , iyo yakabhadhara kubva kune rechiGiriki rokuti "Khêmia" iyo inoreva muFrench: Magie des Noirs uye inotora kubva kuEgypt yekare "kem" kana yakatsva muFrench; VaSufi VaMuslim, iyo ye "Path of Enlightenment"; VaHebheru nevamwe vaKabbalists, iyo ye "nzira yengoro"; Gnostics, "Razor Blade Way" kana "Alchemist-Kabbalist Way"; iyo yeHindu yogi, iyo ye "nzira yenzira"; the Chinese, iyo ye "Chang"; vaTibetan, iyo ye "Rapid Way of Tantrism" kana "Tantric Yoga".
III- Nhengo dzeMbog:
Kuwana kweMbog Liaa kunoitika mumatatu matatu (03) phases: Kucheneswa kana Kutanga, Chiedza kana Adeptat uye Perfection kana Mastery.
A- Initiation kana Kucheneswa kunounza pamwe chete Vadzidzi kana Vadzidzi veMbog ndiko kuti, vagari vomuAfrica vanobva kunyika ino kana vanogara vari kurarama zvikamu zvepakutanga zvebasa rezuva. zvachose vakasarudza musasa Light kuburikidza kwavo hondo kumutsa pachavo kunofambidzana "reHori-Neter" kuburikidza séménisation uropi kana cerebralization urume.
Vadzidzi veMbog vari kuenda kuti urarame zvakanyanya muedzo weNegro-Pharaonic Shipwreck wakati zvinobudirira akakurukura "Heka", kuti vave Uraeus Negro Pharaonic kuIjipiti kana Nyoka Bhaibheri dzendarira ndiko kuti Nyoka kana Kundalini Fire vokuAsia. Vanozvipira ivo zvachose uye vanoziva nezvekutambura kwevanhu uye vanoshanda pasi pemirairo yeShemsou-Hor. Murairo wavo wekutanga ndewe kodzero yekuzvarwa. Ivo vanozivikanwa ne:
- Kuzvipira kwakasimba muna ANKH-X (X ndiro zita remunharaunda yezvakabva kana kugamuchirwa kwemudzidzi);
- Kuregererwa kwekuzvidira kwekusakosha uye kutsvaga kwekutsvaga ruzivo rweNeter-Neterou kuburikidza nekuparara kwezivo yega maAri;
- Kuziva kwehupenyu kuburikidza nekubatanidzwa kwezvitsvene mumagadziro ese ehupenyu uye kushorwa kwakatsanangurwa neAdepts yaSeth-Neter, mukati nekunze simba risina kunaka;
- The zvachose indoor uye panze tsika mufundisi Zvinorairwa Neith-Neter, Mwari yepasi pose Amai Universal zvinoti: kusimudzirwa, popularization uye kufambiswa hama, kubatana, ushamwari, rokusika kutaurawo, chiito uye hupenyu hwemhuri uye pfungwa yekugovana pakati pevana vaIset-Neter, Mwarikadzi Amai mumwechete uye Mukati, wepasi rose;
The vanoziva uye zvechigarire chibayiro kutambura vanhu dzichishandisa uye popularization okuzvipira, okuzvipira, vakanaka, kutsigira nemari, vakanaka, magariro mubhizimisi ... kuti pave uye kuparadzira Africa uye munyika, uchenjeri husingagumi uye hwepasi rose, dzidzo, svesa, mishonga, tsika ye X, teknolojia, hutongi hwakanaka (kodzero, rusununguko uye mabasa evanhu nevanhu, demokarasi uye pachena) , kuchengetedzwa kwemhuri, mukadzi uye mwana pamwe chete neyemamiriro ezvemamiriro ezvinhu, tsika dzorugare uye kushanda, ...
Les Vadzidzi veMbog vane zviratidzo:
- Ankh in gold;
- Mutsvuku chechia kana chirafu.
Vadzidzi veMbog ndivo vari kutarisira:
- Kusimudzirwa uye kupararira munyika yose yekusvitsa upenyu hwemukati kuburikidza nekutsvaga kwekusingaperi kwekumuka kweHor-Neter, Heka uye / kana Ida naPingala;
- Kuparidzirwa muAfrica uye munyika yenzwi rekushivirira, rugare, kusununguka uye kugamuchirwa kwechimwe sezviri kuburikidza nekuremekedzwa kweUchenjeri hwose, hwezvitendero zvose zvisingaiti zviri chaizvoizvo maitiro akasiyana-siyana echitendero, ndiko kureva kubatana pakati pemunhu uye Neter-Neterou;
- Mifananidzo yakagadzikana ye ANKH-X.
B- Chiedza kana Adeptat inosangana neAdepts kana Shamwari dzeMbog zvinoreva kuti "Shemsou-Hor", ndivo vagari vemuAfrica vanobva kune kondinendi kana vanogara vari kuisa Hou-Neter mukati mavo kuburikidza nehutano hwekuziva, hwepedyo uye hwekutsvaga hukuru hweGoogle Embryo kuitira kuti hugadzirire mweya nemweya.
Shemsou-Hor anoedza kubvumira Hou-Neter kupinda muhupenyu hwavo : ivo vari kurarama zvakanyanyisa chimwe chezvikamu zvipfumbamwe (09) zvebasa raHor-Neter rakafanana maererano nemapuraneti eAlchemy (Mbog) kuburikidza nebasa raHercules. IAdepts yeMbog inopa upenyu hwavo zvachose kumunhu anotambura. Ivo mapfumbamwe (09) mairairo ndeokuti: The Shemsou-Hor weNeterou yemapuraneti Moon, Mercury, Venus, Sun, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus uye Neptune. Ivo vanozivikanwa ne:
- The kudiwa kana basa kuti zvechokwadi munhu ndiko kutaura Masters Hou Osiris kana kuburikidza nokuziva kwevanhu, kukura nemasimba kusava kuti kubvumira kuwana nesimba anoratidza chii uye inokudza unhu hwevanhu mune yakakwirira uye iyo, zuva rimwe nerimwe, nevakachenjera uye yakaenzana nekuzvidzivirira kunobvisa Mwari Essence yezvose zvavanodzivanzira pasi nekusvibiswa uye inovatungamirira munzira zvakanakisisa zvakaitwa;
- Musangano wenguva dzose weNeter-Neterou nekutenda, ziso romukati rinotitendera kuona Mwari kuburikidza nekusika kwake, kureva Neterou;
- Kunyarara kana kugona kana kupera kwekutaura kupi zvako.
Shemsou-Hor ane zviratidzo:
Iyo Sphinx, iyo inoparadzira mapapiro uye chiedza chemwenje dutu;
Zvisikwa zvitsvuku kana tsanga;
The Djed, the Heka, the Ankh mugoridhe uye seminhenga dzakawanda dze shiri sezvinoitwa nematenga.
Basa reShemsou-Hor pasi pemirairo yaOsiris weMbog. Ivo vari kutarisira:
Ndiwedzere uchenjeri musha wavo munharaunda kana dzazvinogara wokugamuchirwa zvinozivisa navo dzazvinogara mundima yenharaunda idzi uye harmonization kwavo Hou uyewo avo African munharaunda yacho kondinendi kana Diaspora pedyo;
Umutsidzire, suduruka uye dzichengete temberi, matare uye presbyteries ari African chitendero, nzvimbo, brotherhoods, makambani, chaplaincies uye Hou convents saka musha dzavo kana dzazvinogara wokugamuchirwa kupfuura avo iyo yekupedzisira igovana nevavakidzani vavo;
Kuvandudza, kupfuurira kana kuchinja maererano nemafambiro munharaunda yavanoona tsika yerudzi rwavo kubva kumagariro kana kubvumirwa uye kukurudzira, kufaridzira uye kuparadzira muAfrica uye munyika;
Kuvapo Followers aSeti-Neter, asi Kwete kufara uye nechokwadi ezvitendero, mitambo netsika nechitendero musha wavo munharaunda kana dzazvinogara wokugamuchirwa uye avo gnarled siyana nedzinza avanhu ava;
Shandisa ANKH-X pasi pemirairo yeWsir;
Kuita kuti hutano hwakakwana uye hunogara huripo, hunyanzvi uye / kana unyanzvi hugadziriswe hwevasikana, vakadzi nevana vemunharaunda yavo yakabva kumunhu kana kutorwa.
Murayiro yokutanga pakati Shemsu-reHori ndiko: The vateveri Mbog Neter puraneti Neptune, vaya Neter puraneti Uranus, vaya puraneti Saturn Neter, ivavo Neter waZeusi ivavo Neter yenyika Mars, iyo yeNeter yenyika Sun, iyo yeNeter yenyika Venus, iyo yeNeter yenyika Mercury neyeNeter yenyika Moon.
C- Iyo Maîtraise kana kuti Perfection inosanganisira Osiris kana Masters of Mbog ndiko kuti Varindi veIvanzika kana "Bot (aa) ba Hou" Bassa-Mpoo-Bati. ari"Wsir weMbog" Est munhu weAfrica wekune kondinendi kana wevahedheni vakagadzira Golden Embryo nokuti akabatanidzwa "Hou-Neter" kana kuti Divine Conscious, nokusingaperi uye pasi rose mukati mavo. Anokwanisa kupfuurira kucheneswa kwake muHomusa kuburikidza nemabasa matatu ekupedzisira (03) mabasa aHercules. Pane zvina (04) marudzi:
Osiris akabhabhatidzwa muHou-NeterUpenyu huchiputika muatomu imwe neimwe zuva rose kana Kuziva kwaMwari, kusingaperi uye kwese;
IOsiris yakabhabhatidza zvakanyanya muNoun-Neter, the primordial Ocean,
Osiris uyo akajekesa zvakasimba Simba reAtoum-NeterWemasimbaose Baba kana Kuve kwezvinhu zvose;
Osiris uyo akajekesa zvakasimba Simba reRa-Neter, chimiro chaKristu.
Masters eMbog anozivikanwa ne:
- Kushanda kwekuzvidira kubva kune zvinhu uye zvepabonde: vanozvipira pachavo zvakakwana uye vanoziva nezvekutambura kwevanhu.
- Kutsvaga kwechiedza chechiedza, sayenzi yezvesayenzi, unyanzvi hwokugadzira;
- Kukwidzwa kunofadza, kusvika kune ruzivo rwemasimba akakwirira ayo unhu hwomunhu hunoratidzwa uye hunokurudzirwa mune zvakakwirira.
Masters eMbog ane zviratidzo:
- Ziso raHorasi rakapararira;
- The Uraeus uye Mutsvene Scarabee;
- Chechia kana shangu uye cape tsvuku tsvuku;
- The Wad, the Djed, Ankh uye Heka mune goridhe pamwe neNezinga, chikwama chekuda.
VaMasters veMbog vari kutarisira:
Dzidziso huru paNeter-Neterou kana kuna Mwari, pane mahedheni asingaoneki, nyika uye kuMunhu;
Kuti tisunungure chakavanzika chakatipoteredza: chakavanzika chehupenyu nerufu; Chakavanzika chepamusoro mazano; zvakavanzika zvezvinyorwa zvinobudirira izvo mweya yevanofunga, mafilosofi, uye vanofuridzira vanonwa; zvakavanzika zvekushanduka kwedu kunokosha;
Kuenderera mberi kwetsvene uye pfungwa yekuremekedzwa kwevanhu;
Kuenderera mberi kweHou kana kusingaperi kweAfrica Wisdom, African culture neAfrica Chitendero pamwe nehutano hwemwari uye, pakupedzisira, machechi, tsika nemitambo;
Management of DZIMA AFRICAN FOUNDATION, zvayo mukati mawo (MBOG, the MAAT bv más ANKH-X) uye kunze (gumi nembiri (12) zvikamu zve INTERNAL PATH);
Kubudiswa kwevoruzhinji rweSave yakasimbiswa zvikuru yevanhu vose veAfrica munyika ino kana diaspora.
Kuchengetedza zvakakwana uye zvekusingaperi zvepamweya, zvepfungwa uye / kana zvekudzidzira zvevana ve Lumière Nharaunda dzeAfrica muAfrica kana kuti diaspora.
The yokutanga pamusoro Wsir pamusoro Mbog ndiko: Osiris kunofambidzana achinyatsotaurira Hou-Neter The Osiris kunofambidzana achinyatsotaurira Noun-Neter The Osiris uyo kunofambidzana akapfupikisa Atum-Neter of Energy uye Osiris akapfupikisa kunofambidzana The Energy of Ra-Neter.
Zuva rose reIounou Kubvira kuEgypt yekare (rima)
African nyeredzi - Catherine Hémel